Abanemindeni bazoyijabulela i-Q3 | Isolezwe
Abanemindeni bazoyijabulela i-Q3
Isolezwe / 2 August 2012, 1:07pm /
IMOTO: Audi Q3
UBUCHULE, isitayela, izinga eliphezulu bese kuvala ubuhle uzokuthola kuhlangene ndawonye kwi-Audi Q3 esiqalile ukubonakala iwuvanzi ezitaladini zakuleli. Akujwayelekile ukuthi zonke lezi zinto ezingenhla zihlangane ndawonye, kodwa kujwayelekile ukuthi kube khona ugcobho njengoba nesiZulu sisho sithi akukho soka lingenasici. I-Audi Q3 Sport Utility Vehicle (SUV) ayinawo nomncane ugcobho. Kuzoba umqansa omkhulu kwa BMW njengoba le Q3 ibekene ezithendeni ne X1.
Ngesikhathi sikutshela okokuqala ngale Q3 emuva kokwethulwa sasigxile kakhulu kwi Manual eno-gearbox ojwayelekile ebiza u-R370 000.
Namuhla sizokubeka esithombeni ngeQ3 Quattro S Tronic yona ethe ukunyukela ngezinga ngoba ibiza R431 500. Engingakusho zisuka nje ebhandeni ukuthi lezi zimoto ngaphandle ziyafana kodwa indaba ingaphakathi naku-gearbox.
Le moto iyi sporty esithathe kakhulu ekubeni yi Coupe njengoba ukhakhayi lwayo luthe ukulala ngasemuva kuhle kwe VW CC.
Ngaphambili kuzo zonke izinhlobo zidle ngokugoloza nokuqoqana uma uyiqhathanisa ne Q5 yokuqala. Okuphawulekayo kule Q3 ukushintsha kwe grille, kanti emasondweni nasezinhlangothini iqumbile, okwenza ihambisane kahle namasondo ayo angu 18 inch.
Sekuyinto abayenza umgomo ukuthi izibuko ezinhlangothini ziphume nama-indicator e-LED kwa Audi okwenza imoto ibukeke kahle. I-spoiler sangemuva eside kanye namalambu akubiza ukude azungeze i-tailgate engeza ubuhle kule-Q3.
Le-SUV ubude bayo ingu -4 385mm, kanti ukuphakama kungu-1 590 mm kuzona zonke izinhlobo.
Ibhonethi ne-tailgate kuyi aluminium okwenza isisindo sayo sibe ngu-1 500kg okungesilula kakhulu.
Ngaphakathi i-Audi ephelele, kodwa u-dashboard wayo uthathe kakhulu kwi-Audi A1.
Amabhathini angaphambili kusuka kwi-radio ne-climate control konke kusobala kanti kulula nokukusebenzisa.
Uma uzinika isikhathi uyibhekisisa kahle uzothola ukuthi i-Q3 yi- Audi yokuqala ukuthi iphume nesiteringi esisha esesibukeka ngenye indlela. Angeke uyiswele indawo yokubeka izinto kule moto ngoba ziyinsada kusukela emaphaketheni ezihlalo nasemqolo ophakathi kwesihlalo somshayeli nephasenja.
Kumele ngibaxwayise odadewethu abakhonze ukufihla ukuthi maningi namathuba okuthi impahla yakho ugcine ungasazi nokuthi uyibeke kuliphi ikhosombe kule moto.
Noma kuyi-SUV encane kodwa ngaphakathi indlalekile ngemuva iyakwazi ukuhlala izinsizwa ezine noma kudingeka “zithandane”.
Isikhala sokubeka impahla okuyinto ebaluleke kakhulu kwabanemindeni singu-460 litres, kanti uma izihlalo zilalisiwe lesi sikhala sifinyelela ku-1 365 litres.
Okhakhayini njengoba iphuma nama-roof rails iyakwazi ukulayisha umthwalo oyisisindo esingu 75 kilograms.
Le moto iyakwazi ukudonsa umthwalo ongamathani amabili kodwa kuye ngokuthi inenjini engakanani. Ihlukene ngezinjini kukhona engu 4- cylinder ezimbili ezingama TFSI ezisebenzisa u-petrol kanye ne-TDI kadizili lezi zinhlobo ziphuma nezinjini ezingu 2-litre.
Q3 2.0 TDI 103 kW man – R370 000
Q3 2.0 TDI 130 kW quattro S tronic – R 431 500
Q3 2.0T FSI 125 kW quattro man – R 404 500
Q3 2.0T FSI 125 kW quatro Stronic – R 421 500
Q3 2.0T FSI 155 kW quattro S tronic – R 467 000